Madaxweynaha DDS Oo Qasriga Madaxtooyada Ku Qaabilay Wefti Ka Yimid Somaliland Iyo Nuxurka Qodobbadii Ay Ka Wada Hadleen - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweynaha DDS Oo Qasriga Madaxtooyada Ku Qaabilay Wefti Ka Yimid Somaliland Iyo Nuxurka Qodobbadii Ay Ka Wada Hadleen
Jigjiga (JigjigaOnline) – Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar ayaa kulan la yeeshay wefti ka yimid Somaliland oo muddo toddobaad ku dhow ku sugnaa magaalada Jigjiga.
Kulankan oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ayaa waxay labada dhinac kaga wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan danaha labada dal, waxaanay si gaar ah u dul istaageen mashaariic muhiim ah iyo ammaanka.
Waftiga ka yimid Somaliland oo uu hoggaaminayey Wasiirka Biyaha Saleebaan Cali Koore, ayna wehelinayeen Xildhibaan Hanad, Xildhibaan Xasan Shahar iyo masuuliyiin kale, ayaa ka hor intii aanay madaxweyne Mustafe la kulmin waxay booqashooyin kusoo mareen mashaariic horumarineed oo Xafiiska Biyaha Deegaanku ka wado duleedka magaalada Jigjiga.
Intii uu socday kulanka uu madaxweynuhu la yeeshay weftiga, waxay si faahfaahsan uga wada hadleen sidii sare loogu sii qaadi lahaa, loona xoojin lahaa nabadgelyada labada dal ee xuduudka dheer leh, taas oo labada dhinacba ay siinayeen dareen iyo mudnaan gaar ah.
Waxa kale oo ay isla soo qaadeen dhimaha waddada Berbera Coridor ee xidhiidhin doonta magaalada Dekedda ee Berbera iyo Tog-wajaale, isla markaana sahli doonta ganacsiga labada dawladood.
Markii uu shirku dhamaaday, waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay Wasiirka Beeraha DDS, Wasiirka Maaliyadda DDS iyo Wasiirka Biyaha ee Somaliland.
Ugu horreyn wasiirka Biyaha DDS, Bashiir Shaafi Cumar ayaa saxaafadda usoo bandhigay wixii ay ka wada hadleen iyo nuxurka qodobbadii laysla soo qaaday, waxaanu yidhi: “Intii uu kulanku socday waxa uu Madaxweynuhu carrabka ku dhuftay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen sidii loo xaajin lahaa walaaltinimada Somaliland iyo dawladda Deegaanka. Dadku waa dad walaalo ah, isku mid ah oo xidhiidh badan u dhexeeyo.”
Wasiirka Maaliyadda DDS, Mubashir Dubbad oo isaguna shir saxaafadeedkaas ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay sida ay shacabka labada dal u yihiin kuwo isku mid ah oo aan meelna kala tegaynin, waxaanu yidhi: “Meel aan ku kala tegayno ma laha. Haddii lays dilo, haddii laysku dudo, kuwo meel kala tegaya ma nihin. Jaar baynu nahay, waa inaynu dhaxanta iska dugsano, isku nimaadno oo had iyo jeer isku caqli celino. Markaa dawlad ahaan iyo dhaqan ahaanba aad baanu idiin soo dhoweynaynaa kii ka naxaya iyo kii ku farxayaba dad kala maarmaya oo meel kala tegaya ma nihin.”
Wasiirka maaliyaddu waxa kale oo uu tilmaamay in xidhiidhka DDS iyo Somaliland ay tahay in lasii xoojiyo, waxaanu xusay inay dawlad deegaan ahaan booqashooyin ku tegi doonaan gobollada Somaliland sida magaalooyinka Borama, Burco iyo Laascaanood, halka uu weftiga Somaliland na ugu baaqay inay tagaan Qabri-dahar, Nogob, Wardheer iyo Dhagax-buur.
Ugu dambayn waxa hadal kooban jeediyey wasiirka Biyaha Somaliland, Saleebaan Cali Koore, waxaana uu xusay farriin uu usoo dhiibay madaxweyne Muuse Biixi oo shacabka DDS iyo madaxdooda uu usoo diray, waxaanu yidhi: “Waxa aan halkan kaga faa’iidaysanayaa farriin uu madaxweynaha Somaliland iigu soo dhiibay shacabka DDS oo ahayd Salaan kashka iyo laabta kasoo go’day.”
Wasiirku waxa kale oo uu tilmaamay arrimihii ay ka wada hadleen madaxweynaha DDS iyo isfaham ay gaadheen intii uu kulankoodu socday, isagoo ka marag furay isbeddelka furfurnaanta ee ka hana-qaaday deegaanka intii uu Madaxweyne Mustafe xilka hayey, waxaanu yidhi: “Waxaanu guntii gaadhnay isfaham ballaadhan aan is leenahay labada dal iyo labada xukuumadoodba wax weyn ayuu kusoo kordhin doonaa. Runtii waxa muuqata in furfuran ballaadhan uu bilaabmay muddadii uu maamulka cusub ee DDS uu bilaabmay.”